Metamask Kwidziridzo: Chinjana pane iyo Binance Smart Chain zvakananga kubva kuMetamask - Cazoo chikwama
musha » musha » Metamask Kugadziridza: Chinjana pane iyo Binance Smart Chain zvakananga kubva kuMetamask chikwama
Tag: Binance Smart Cheni, Metamask, pancakeswap, Binance Smart Cheni Network, kuchinjanisa chiratidzo
Iyo yazvino yekuvandudza yeMetamask inoita kuti hupenyu huve nyore kune vadikani veBinance Smart Chain: ikozvino zvave kuita kuchinjana tokeni zvakananga kubva kudesktop kana nharembozha. Shanduko yekuchinjisa inosanganisa dhata kubva kune yakasarudzika yekuchinjana aggregators, vanogadzira misika uye maDEX kuona kuti iwe unowana yakanakisa mutengo neiyo yakaderera network network.
Metamask, yakanakisa chikwama cheDeFi
Chinjana chekuchinjana, chiri pazasi pechikwama chedu, chinoona kuti iwe unogara uine mukana wekusarudzika kwematanho uye nemitengo inokwikwidza, ichipa mitengo kubva kune akawanda maunganidzi uye vagadziri vemusika mumwechete munzvimbo imwechete. Mari yebasa ye0,875% inogadzirirwa otomatiki mune yega yega quote, iyo inotsigira kuenderera mberi kwekuvandudza kuti MetaMask ive nani.
Kiyi swaps mukati meMetamask, kamwe yakabatana neiyo Smart Chain
Metamask ndizvo chaizvo chikwama chakanakisa cheDeFi. Dai chete ndaive nenguva yekupedzisa chinyorwa icho .. ..
Iwe unofanirwa kuchinja kubva kuBinance Smart Chain kuenda kuBinance neMetamask. Unogona kushandisa iyo Binance Bridge. Unozviwana zvakare yakatsanangurwa apa.
Metamask: danho nedanho gwara kune yakanakisa chikwama cheDeFi
Chii chinonzi Binance Smart Chain, uye inosangana sei neMetamask